Ohiri Isi Block Ball Iburu Manufacturers, Suppliers - China Ohiri Isi Block Ball Iburu Factory
● Ihe eji arụ ọrụ nke ọma kwesiri ka nke ịgba blọl miri emi.
● Ejiri mee ihe kwesịrị ekwesị, ọ dịghị mkpa ịsacha tupu echichi, ọ dịghị mkpa ịgbakwunye nrụgide.
● A na-etinye maka oge chọrọ ngwa na akụrụngwa dị mfe, dịka igwe ọrụ ugbo, sistemụ njem ma ọ bụ igwe ihe owuwu.
Ntinye ntinye nke nwere UCP 200 zuru oke
Isiike integral Ọdịdị, mfe iji wụnye.
O Wide n'ime mgbanaka: eme ka jacking mkpọchi, isiike mma.
A-Waya Top: wires abụọ dị elu na Angle nke ogo 120 na mgbanaka dị n'ime iji hụ na ọ dị mfe ijigide eriri ahụ.
Ring Na-echekwa mgbanaka: ọ dị otu n'akụkụ abụọ, ga-egbochi ájá n'ụzọ dị irè.
● Kpọtụrụ akara akara roba: a rụnyere ya n'ime mgbaaka ndị na-ejigide ya n'akụkụ abụọ.
Emeputa * Tụkwasị radial fanye bọl agba UCF
Elu * Tụkwasị na-amị na oche bụ a amị unit nke na-agwakọta Rolling agba na-agba oche. Imirikiti ihe mpempe akwụkwọ dịpụrụ adịpụ bụ mpempe dị n'èzí, yana ya na oghere nke nwere oghere dị n'ime ya, ụdị nke ihe owuwu dị iche iche, ụwa niile na ịdị mma dị mma.
Mpi price insert agba UCFX00
Akụkụ dị n'etiti UCF200 na UCF300, ọ bụghị obere, ihe arụ ọrụ na imewe bụ otu, ọ bụ ihe dị iche na akụkụ, ọ bụrụ na ịnweghị ihe dị n'etiti etiti ogologo, nwere ike dochie ọtụtụ.
XRL ika elu kpọmkwem ohiri isi ngọngọ amị UCFC
The isi ala na-nyere a okirikiri onyeisi, nke nwere ike enịm ke okirikiri oghere nke ogbe, otú echichi nkenke dị elu na n'ọnọdu ziri ezi.
Ihe eji ebu ihe bu ihe eji ebu ihe bu ihe eji eme ya, ihe ndi ozo na ndi ozo na ndi na-ebu ihe ndi ozo.
Igwe anaghị agba nchara fanye agba ngọngọ UCFL 200
Ọdịdị ahụ dị mfe ma dị mfe ịwụnye, kwesịrị ekwesị maka obere mpaghara nke akụkụ nnyefe. Ogologo etiti nke oghere abụọ ahụ na-adaba na etiti etiti nke oche oche nke oche oghere nke otu ụdị.
UCFL isi ngwa: echichi nke obere spacing size nke ígwè, ala ebu, nri ígwè, na-emepụta ọgwụ ígwè, wdg
Ọdịdị ahụ dị mfe ma dị mfe ịwụnye, kwesịrị ekwesị maka obere mpaghara nke akụkụ nnyefe. Ogologo etiti nke oghere abụọ ahụ na-adaba na etiti etiti nke oche oche nke oche oghere nke otu ụdị
UCFL isi ngwa: echichi nke obere spacing size nke ígwè, ala ebu, nri ígwè, ọgwụ ígwè, wdg
Mpi price elu àgwà wet amị UCFL 300
XRL ụdị ụdị ntinye biarin UCT200
Ihe mmịfe ihe mmịfe ahụ dabara adaba maka ngwa chọrọ ngbanwe nke ihe ndozi na ngwaọrụ ndọtị belt, dị ka ngwa ebu. Ọ nwere ihe abụọ iche: igba ígwè slide ngọngọ oche na zọọ ígwè slide ngọngọ oche; Formdị ọ bụla nwere ọtụtụ usoro kpochidoro ịhọrọ site na. Nkedo ígwè slide blocks ndị kwesịrị ekwesị maka ọkọlọtọ ibu ngwa; Ogwe ihe mmịfe ebule adabara maka ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa.
Gbochie ntinye nke bu UCT300